रोचक – agrimnepal
८२ व’र्षे छो’रा’को हे र’चाह ग’र्दै स’य व’र्षे आ मा
उमेर एक सय बर्ष पुग्यो तर, अझैपनि उनले आफ्नो ८२ बर्षीय छोराको हेरचाह गरिरहेकी छन् । यो कुरा सुन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर, बास्तविकता यही छ । हुन त यो घटना नेपालको नभई ईङ्ल्यान्डको हो । समाचार माध्यमहरुमा जनाइए अनुसार, लिवरपूल इङ्यान्डकी एक, सय वर्षीया एडा किन्टिगका चारजना सन्तान छन् । जसमध्ये सबै भन्दा […]
प्याज बैंकमा राखेर लिइयो लोन
छिमेकी देश भारतको वाराणसीमा प्याज धरौटी राखेर बैंकबाट लोन लिइएको घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । वास्तवमा यो समाजवादी पार्टी (सपा)का कार्यकर्ताहरूले बीजेपीको सरकारलाई गरेको व्यंग्य थियो । नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि प्याजको मूल्य अत्याधिक भएकाले भारतमा पनि सरकारको विरोध भइरहेको छ । मुलायमसिंह यादव अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टीले सरकारको विरोध गर्न […]
बिरामी जाँच्न अस्पताल धाउने प्रधानमन्त्रीको अनौंठो आनीबानी
हाम्रो नेता–मन्त्री उपचारका लागि विदेश सयर गर्छन् । उनीहरुको उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिन्छ । भुटानका प्रधानमन्त्रीको अवस्था भने फरक छ । उनी आफ्नो उपचार होइन, जनताको उपचारका लागि अहोरात्र खटिन्छन् । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि उनी चिकित्सक थिए । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि उनी रोगीको उपचारमा निरन्तर खटिने गरेका छन् । अहिले पनि उनी […]
कडा स म्भो ग ग र्दा यी युवतिको ग यो ज्या न
न्युजील्याण्डमा एक युवतीले आफ्नो पार्टनसंग कडा सम्भोग गर्दा ज्यान गएको खुलेको छ । त्याँहाकी एक युनिभर्सिटीकी विद्यार्थी समेत रहेकी ग्रेस मिलानी नामकी एक युवतीको कडा सम्भोग गर्दा ज्यान गएको खुलेको हो । उनको प्रेमीले गाडेको अवस्थामा प्रहरीले ती २१ बर्षिय महिला फेला परेको थियो । प्रेमीलाई अनुसन्धानपछि अदालतमा सुनुवाई हुँदा निधनको कारण ‘कस्डा सस्म्भोग भनिएको […]
चीनले बनायो आफ्नै सूर्य : वास्तविक भन्दा १० गुणा चम्किलो !
एजेन्सी । संसारमै दिन र रातको फरक सूर्यले निर्धारण गर्छ । वातावरणका लागि पनि सूर्य उत्तिकै महत्व छ । तपाईंलाई थाहा छ ? चीनले आफ्नै सूर्य बनाइ सकेको छ । सूर्यले वास्तविक सूर्यले जस्तै पृथ्वीमा प्रकाश फ्याँक्नेछ । चीनले कृत्रिम सूर्य परमाणु फ्युजन गरेर बनाएको हो । वास्तविक सूर्यको भन्दा यसले १० गुणा बढी उज्यालो […]
तपाईले कति ठूलो फर्सी देख्नु भएको छ ? सायद ५ किलो वा १० किलोको हुन सक्ला । औसतमा फर्सिको वजन ५ देखि १० किलोसम्म हुने गर्छ । तर क्यानडाको ब्रुस काउन्टिस्थित पोर्ट एल्गिन गाउँमा ८ सय किलो भन्दा बढी तौलको फर्सी प्रर्दशनीका लागि राखिएको थियो । क्यानडाको पोर्ट एल्गिन गाउँमा हरेक वर्ष फर्सी प्रतियोगिता हुने […]
नांगो शरीरमा ‘रगत’ पोखेर आन्दोलन
बार्सिलोना : विश्व पशुपंक्षी अधिकार दिवस अधिकांश देशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो । स्पेनमा मनाइएको जनावर दिवसले भने धेरैलाई चकित तुल्यायो । यो दिवस मनाउने क्रममा पशुपंक्षीलाई काटमार गर्ने कामको विरोध गर्दै ७० जना अभियन्ताहरु नांगै सहरमा सुते । नांगो शरीरमा नक्कली रगत पोखेर उनीहरुले बार्सिलोना सहरमा विरोध जनाएका हुन् । डेलीमेलका अनुसार ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ […]
ट्राफिक जामले हैरान भए युवा, बनाए आफ्नै हेलिकप्टर
एजेन्सी । तपाईं ट्राफिक जाममा पर्दा उडेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्नुहुन्छ ? धेरैले यस्तो कल्पना गरेका हुन्छन् । यस्तै कल्पनालाई वास्तविकतामा पुर्याउनका लागि इन्डोनेसियाको जाकार्ताका एक युवा जुजुन जुनैदीले आफ्नै हेलिकप्टर बनाएका छन् । जुनैदी दैनिक हुने ट्राफिक जामका कारण समस्यामा थिए । त्यसैले उनले उडेर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नका लागि हेलिकप्टर बनाएका हुन् […]
गर गहना धरौटी राखेर प्याज लिन थाले सर्वसाधारण
काठमाडौं । अहिले प्याजको मुल्य कति बढेको छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई राम्रोसँग थाँहा छ । नेपालमा त गुणाको हिसाबले प्याज बढ्दै गइरहेको छ । भारत, पाकिस्तान, नेपाल लगायतका देशहरुमा प्याज हाहाकारजस्तै भएको छ । मान्छेहरु पसल फोडेर पैसाको सट्टा प्याजका बोरा लिएर भागेको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । अहिले बाहिर आएको खबर […]
अनौठो वालिका : जो जन्मदै थिईन गर्भवती, जन्मेको भोलिपल्टै गर्नु प¥यो शल्यक्रिया
दुनियामा बिभिन्न खालको आनौठो घटनाहरु सार्वजनिक बेला बेला भै रहन्छन् । जुन कुराहरु साधरणतया तपाई हामीलाई अनौठो मात्र हैन अविश्वनीय नै लाग्छ । कोलम्बियामा पनि एम यस्तै खालको अनौठो कुरा सार्वजनिक भएको छ । कोलम्बियाकी एक ७ महिने गर्भबती आमाको पेटमा रहेको बच्चको पेटमा जुम्ल्याहा भ्रुणहरु रहेको डाक्टरहरुले पत्ता लगाएका थिए । उक्त परजीवी जुम्ल्याहा […]